Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet | Nleta Hultsfred
hem » 🛏️ Ụlọ » 🏡 Ụlọ » Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet
Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet dị ihe dịka 10 km ọdịda anyanwụ nke Hultsfred, ihe dị ka nkeji 25 na Vimmerby. Mpaghara a bu ebe ana echekwaba umu umu mmadu na ebe azu nke gunyere odo odo na ponds iri ato. An eldorado maka ndị na-achọ udo na ịdị jụụ n'okike .. will ga-ahụ ebe m n'anya n'ihi na ọ dị jụụ ma dị mma!. Ebe obibi m kwesịrị ekwesị maka ndị di na nwunye, ndị njem na ndị enyi ụkwụ anọ (anụ ụlọ).
.Mụ ihe, 570 81 Ezenwankwo, Sverige
Nyocha 11 na Google
5/5 3 afọ gara aga
Ihe di nma ma dikwa nma.
Rahul Kumar kwuru
Milladur Rahman kwuru
Na -enwe ọmarịcha eke na ịdị jụụ nke mpaghara ọdọ.
N'etiti enweghị ebe na-enweghị mmiri pọmpụ na ọkụ eletrik. Anyị hụrụ ya n'anya. Osimiri buru ibu na obere osimiri
4/5 4 afọ gara aga
Ebe mara ezigbo mma ma dị mma. Ọdọ na okike ndị mara mma karịa. Anyị gbazitere ụlọ "ụlọ" na-ahụkarị ma ọ masịrị anyị ịnọ ebe ahụ n'agbanyeghị na enweghị mmiri ozuzo. Ezigbo ebe ịnọkwa ya na tent ma ọ bụ adọkpụ.
Ulo ulo niile